एप्पलआइफोनको नयाँ संस्करण आइफोन ११ सार्वजनि - Janta Nepal
एप्पलआइफोनको नयाँ संस्करण आइफोन ११ सार्वजनि
September 11, 20190201
आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले आइफोनको नयाँ संस्करण आइफोन ११ सार्वजनिक गरेको छ । आइफोन ११ मा यसअघिका संस्करणमा भन्दा बढी क्यामरा र प्रोसेसर छन् ।
आइफोनको नयाँ प्रोसेसरको अपडेट यसअघिको भन्दा तीव्र रहेको र ब्याट्री पनि कम खर्च हुने जनाइएको छ। एप्पलका अनुसार नयाँ संस्करणको आइफोनका दुई प्रो मोडलहरु (आइफोन ११ प्रो, आइफोन ११ म्याक्स) को ब्याट्री क्षमता आइफोन एक्सएसको भन्दा चारदेखि पाँच घण्टा बढी रहेको छ । तर नयाँ आइफोनमा फाइभ जी को सुविधा भने छैन ।
नयाँ आइफोनमा अल्ट्रावाइड रेअर क्यामरा छन्, जसले टू एक्स अप्टिकल जूम आउट गर्न सक्छन् । प्रो मोडलका आइफोनमा टेलिफोटो नर्मल लेन्स रहेको छ, जुन यस अघिको आइफोन एक्सएस र एक्स एस म्याक्समा पनि थियो । तर आइफोन ११ को बेसिक संस्करणमा भने अल्ट्रावाइड र स्ट्याडर्ड लेन्स मात्रै छन् ।
आइफोन ११ को मूल्य यसअघिको संस्करणको भन्दा केही कम छ । यसको स्टोरेज क्षमता अनुसार ७२९ देखि ८७९ पाउण्ड स्ट्रर्लिङ्गसम्म रहेको छ । तर प्रो मोडलका फोनहरु भने आइफोन एक्सएस संस्करण भन्दा केही महंगो छ । प्रो मोडलका फोनको मूल्य एक हजार ४९ देखि १४ सय ९९ पाउण्ड स्ट्रर्लिङ्गसम्म पर्ने छ । अबको १० दिनपछि यी फोन बजारमा बिक्रीमा जाने छन् ।
यस्तै एप्पलले स्मार्ट वाचको नयाँ संस्करण पनि सार्वजनिक गरेको छ।
चितवनमा विप्लवका छोरा प्रकाश चन्दसहित १५ विद्यार्थी पक्राउ
नेपालको सवैभन्दा धेरै अपराध हुने १० जिल्लाहरु
Hey Buddy!, I found this information for you: "एप्पलआइफोनको नयाँ संस्करण आइफोन ११ सार्वजनि". Here is the website link: http://janatanepal.com/iphone/. Thank you.